महत्वपूर्ण पानी प्रतिरोधी लेमिनेट फ्लोरिंग
एस पि सी स्थापना विधि
भुइँ अन्डरलेमेन्ट को फरक
SPC फ्लोरिंग VS मा क्लिक गर्नुहोस्। ग्लु-डाउन LVT
SPC क्लिक फ्लोरिंग SPC क्लिक फ्लोरिंग एक अस्थायी LVT स्थापना विधि छ, जसको मतलब छ कि उनीहरु कुनै भुँइ वा विनाइल फ्लोर चिपकने टेप बिना उप-भुइँमा तैरन्छन्। यो धेरै घर मालिकहरु को लागी एक धेरै सजिलो DIY परियोजना बन्छ। र SPC planks घर को कुनै पनि कोठा मा स्थापित गर्न सकिन्छ। साथै यो ...
LVT र टुक्रा टुक्रा फर्श को मतभेद
डिजाइन र सामग्री फर्श को दुई प्रकार को बीच सबैभन्दा स्पष्ट अंतर उपलब्ध डिजाइन को संख्या हो। जबकि टुक्रा टुक्रा फर्श विभिन्न काठ को रूप मा उपलब्ध छ, LVT फर्श काठ, ढु and्गा र अधिक सार ढाँचा को एक विस्तृत विविधता संग डिजाइन गरीएको छ। एल लक्जरी विनाइल फलक floo ...
सुझाव TOPJOY बाट फर्श छनौट गर्न
१️। भुइँ तपाइँको इन्द्रिय ट्रिगर गर्नुपर्छ। तपाइँ के मन पराउनुहुन्छ, दुबै सौन्दर्य र भावनात्मक रुपमा? २. भुइँ तपाइँको खुट्टा मुनि कस्तो लाग्छ? केहि देशहरुमा, मानिसहरु घर मा खाली खुट्टा हुन्छन्। खुट्टा मुनिको आराम महत्त्वपूर्ण छ। ३️। देहाती र ... - तपाइँ कोठा मा के भावना गर्न चाहानुहुन्छ सोच्नुहोस्।
भेनीर र टुक्रा टुक्रा बीच के फरक छ?
जब तपाइँ टुक्रा टुक्रा फर्श बनाम हार्डवुड फर्श तुलना गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ कि दुई बीचको मुख्य फरक के हो। टुक्रा टुक्रा फर्श वास्तव मा काठ को बनेको छैन। यो हार्डवुड फर्श को नक्कल गर्न को लागी बिभिन्न चीजहरु को एक मिश्रण बाट बनेको छ। अर्कोतर्फ हार्डवुड फर्श fr बाट बनेको छ ...
किन ताला फर्श यति लोकप्रिय छ?
ताला फर्श, जस्तै पीवीसी क्लिक फर्श, WPC फर्श, एसपीसी फर्श आदि, जो पुरा तरिकाले न nail मुक्त, गोंद रहित, कील मुक्त, सीधै भुइँ को भुइँ मा राखिएको हुन सक्छ। यो निम्न लाभहरु छन्: १) सुन्दर ताला बल को कारण, ताला फर्श सी संग सबै पक्षहरु सम्म फैलीएको छ ...
SPC कठोर कोर लक्जरी Vinyl फर्श बनाम WPC फर्श
SPC कठोर कोर र WPC दुबै पनरोक vinyl फर्श विकल्प हो, तर तिनीहरुको फरक के हो? दुबै WPC र SPC फर्श को कोर पनरोक छन्। WPC फर्श मा, कोर काठ प्लास्टिक कम्पोजिट बाट बनेको छ, जबकि SPC कोर ढु plastic्गा प्लास्टिक कम्पोजिट बाट बनेको छ। ढु st्गा कठोर र कम लचीलापन छ ...
Herringbone SPC भुइँमा क्लिक गर्नुहोस्
चूना पत्थर कठोर कोर संग Vinyl planks TopJoy Herringbone विशेष गरी यूरोप शैली हेरिंगबोन ढाँचा को लागी डिजाइन गरीएको हो। 5.0mm मोटाई संग SPC क्लिक फ्लोरिंग भान्छा र बाथरूम को लागी, बेडरूम underfloor तताउने को लागी एक सही समाधान हो। यसको गुणहरु को लागी धन्यवाद, फ्लोट को रूप मा पनि स्थापित ...
TopJoy फर्श- Vinyl फर्श को लागी तपाइँको एक स्टप गन्तव्य
Vinyl फर्श तपाइँको घर वा व्यापार को लागी एक महान विकल्प हुन सक्छ। विनाइल फ्लोर टाइल्स वा विनाइल फलक फर्श संग, तपाइँ कुनै पनि नजर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। TopJoy ढाँचा र प्रत्येक कोठा को लागी सामानहरु को एक किसिम बोक्छ, तपाइँलाई सबै भन्दा राम्रो vinyl फर्श विकल्प संग प्रदान गर्न को लागी। तपाइँको सजावट को पूरक को लागी एक शैली छान्नुहोस् ...
फर्श को रंग छनौट को लागी3सुझाव
कसरी रकेटि ocean महासागर भाडा भुइँ आपूर्ति श्रृंखला को आकार बदल्न सक्छ?
विश्वव्यापी महासागर भाडा एक उच्च स्तरमा संचालित भएको छ जब बाट महामारी शुरू हुन्छ र अब, जब हामी मे, २०२१ मा प्रवेश गर्छौं, हामी शिपिंग लाइनहरु बाट केहि जबडा छोड्ने प्रस्ताव प्राप्त गर्दैछौं। चीन को पूर्वी तटीय बन्दरगाहहरु बाट अमेरिका को पूर्वी तटीय बन्दरगाहहरु मा एक २० जीपी कन्टेनर ढुवानी को उदाहरण लिनुहोस्, म ...
123456अगला> >> पृष्ठ १ /।
संपर्क: (+86) 21-39982788
हामीलाई लेख्नुहोस्: info@topjoyflooring.com
spc विनाइल तल्ला , spc काठ टायल तला , spc विनाइल काष्ठफलक तला , spc विनाइल तख्तें , एसपीसी तख्ता , spc जल प्रमाण विनाइल तला ,